Ukuxilongwa Kokungezwani Nezinto Nezivivinyo - i-GAAPP
Ikhaya>Yiziphi Izinhlobo Zokuhlolwa Odokotela Abazisebenzisayo Ukuthola Ukungezwani Komzimba?>Ukungezwani komzimba nokuhlolwa
Ukungezwani komzimba nokuhlolwaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T11:21:59+01:00
Ngabe uthimula njalo lapho uphulula ikati? Ngabe uqhuma isifuba lapho inyosi noma iminyovu ikuluma? Lapho-ke kungenzeka ukuthi usuvele uyazi ukuthi yini amanye ama-allergen akho. Imvamisa awazi ukuthi yini ebangela izimpawu zakho zokungezwani komzimba. Ukuhlonza ukungezwani komzimba kungaba nzima ngoba izimpawu zingafana nezinye izimo. Ungathunyelwa yi-GP yakho kuchwepheshe wezokwelapha.
Odokotela Bazihlonza Kanjani Izinkinga Zomzimba?
Odokotela bahlola ukungezwani komzimba nezinyathelo ezintathu:
Umlando womuntu siqu nowezokwelapha
Udokotela wakho uzokubuza imibuzo eminingi ukuthola izimbangela zezimpawu zakho zokwelashwa. Bhala amanothi ekhaya ngomlando wakho womndeni, izinhlobo zemithi oyisebenzisayo, nendlela yakho yokuphila ekhaya, esikoleni noma emsebenzini. Bhala phansi ukuthi zenzeke nini, kuphi futhi kanjani. Ingabe uthola izimpawu ngezikhathi ezithile zonyaka? Ingabe uhlupheka kakhulu ebusuku noma emini? Ingabe ukuvezwa kwezilwane kuletha izimpawu zakho? Ingabe zenzeka nganoma yisiphi isikhathi esithile sosuku? Ngabe kukhona ukudla noma isiphuzo okuletha izimpawu zakho.
Lokhu kuzosiza udokotela ukuthi aziqonde ngokuphelele izimpawu zakho.
Uma kunobufakazi bokungezwani komzimba nodokotela wakho uyobheka amehlo akho, impumulo, izindlebe, umphimbo, isifuba nesikhumba ngesikhathi sokuhlolwa. Kwezinye izimo udokotela kufanele ahlole amaphaphu akho ngokuhlolwa kokusebenza kwamaphaphu. Kwesinye isikhathi futhi ungadinga i-X-ray yamaphaphu akho noma amasinusi.
Uvivinyo lokuthola izifo zakho zomzimba
Izivivinyo zingenye yamathuluzi amaningi atholakalayo okusiza udokotela wakho ekwenzeni ukuxilongwa. Akekho ukuhlolwa okukodwa okwazi ukuxilonga ukungezwani komzimba.